Ungamtsala njani uMfazi oyi-Aries: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza awele Ethandweni - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ungamtsala njani uMfazi oyi-Aries: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza awele Ethandweni
Ungamtsala njani uMfazi oyi-Aries: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza awele Ethandweni
Lwela ukuthanda kwakhe.
Yiba nobulali kodwa womelele kunye naye.
Musa ukuphikisana nezicwangciso zakhe.
Makabe yilento ayiyo.
Kubaluleke kakhulu ukuba ugcine ukuzithemba kwakho - uya kuma ngaphandle kwamathuba. Kuya kufuneka umbonise ukuba uyakufanelekela ukuhoywa, kodwa ungazami nzima nokuba uza kubona ngqo ngale nto.
Endaweni yokuba wenze i-aura yemfihlelo ejikeleze wena, uzenze ngathi awunamdla kuye. Umfazi we-Aries uyakukufunda oku njengomceli mngeni, kwaye njalo nje… ukuzingela kuya kubakho.
Inkululeko yakhe ibaluleke kakhulu kuye, umlo wothando oluvela kwisithandwa sakhe yenye yexabiso lomfazi wase-Aries, kwaye ulindele okufanayo ngokubuya.
Emva kokuthandana, uthembekile, ude abe nomona ngamanye amaxesha. Ufuna ukunikwa ingqwalaselo epheleleyo kunye nexesha lokungqina uthando olusemva kwesenzo.
Njengomfazi othembekileyo enjalo akadingi mntu ukuba amlandele, kodwa endaweni yoko umntu oza kuqhutywa ngokulinganayo kunye namandla njengoko enjalo.
Kananjalo, amabhinqa ama-Aries atsaleleka kumadoda azithembileyo, ade azifumane nenceba kwiimeko ezinqabileyo. Bayifumana ngokungathandabuzekiyo ngesondo de umgca wokuzithemba nokuzikhukhumeza uwele.
Abamkhangeli umntu ozonwabisayo, bafuna indoda ezolileyo nezinzileyo ukubonelela ngokulingana. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba ukongamela kwakhe kwaye ngamanye amaxesha ubuntu obunoburhabaxa kuyinxalenye nje yokuba ungubani - uluphawu loMlilo kwaye unomdla wokuhamba nalo.
Akanangxaki yokuma emhlabeni kwaye akuxelele into ayifunayo. Ngelixa olu luphawu oluthandekayo, kunokukhokelela ekubeni abe neshushu ngamanye amaxesha.
Kuya kufuneka ube nakho ukuthatha inyathelo xa kufuneka njalo. Oko kwathethi, kukho umgca olungileyo phakathi kokumenza azive ngathi ume naye kwaye umenze azive ngathi umile ngaphezulu kwakhe.
Akafuni ukuziva ngathi uyamongamela - khumbula into ayifunayo liqabane kulwaphulo-mthetho, kodwa ukuba uziva engenayo oko kungangcono abe yedwa.
Ngelixa amabhinqa ama-Aries anokuza njengobukrwada kunye nobundlongondlongo, kuya kufuneka umbonise icala lakho elibuthathaka ukuba ufuna ukuya naphi na kuye. Kuya kufuneka uyihlonele inkululeko yakhe, njengoko abafazi be-Aries befuna amaqabane axabisa ukuzithemba kwabo.
Kufuneka uyazi indlela yokumthoba umsindo. Ikrele elintlangothi-mbini apha kukuba uyisithandwa esinomdla, kodwa oko kuza nomsindo. Ngamaxesha okuqina komsindo, ulindele ukuba ungxame uye ecaleni lakhe kwaye umhlise ezantsi. Ukuba akukhange kubenjalo, kuyakongeza ukubasa umlilo.
Indoda eyi-virgo ekopela kumfazi wesikridiya
Umfazi ongu-Aries kufuneka azi ukuba uyamfuna, kwaye ufuna ukumenzela ntoni ngothando… mxelele ke! Kwaye mxelele ngokuvakalayo, ngokucacileyo nangokucothayo.
Ukuba ufuna ukutsala umfazi we-Aries, kuya kufuneka utshatise ukudlala ngothando kwakhe kwaye ubonise ukuba unokunika okuhle njengoko ufumana. Nje ukuba uthimbe ingqalelo yakhe, hlala phantsi ulinde yena ukuba enze inyathelo elilandelayo.
Ngaphandle kokuzithemba okuphezulu kunye nokuzithemba, umfazi we-Aries naye usengozini. Ufuna ukuvunywa rhoqo, ukuhoywa kunye nokunconywa. Uya kukhawuleza atsalwe yindoda enako ukuhlamba icala lakhe lothando ngokumncoma, avume izigqibo zakhe kwaye onwabele kwimpumelelo yakhe kunye naye.
Akanangxaki yokuchaza icala lakhe leemvakalelo kwaye uya kuziva ekhululeke ngakumbi ukuba wenza okufanayo. Abafazi abangama-Aries bathanda ubutshomi-ke yiba ngumnumzana.
Yenza iinzame zokunxiba ezisithoba, uziphathe kakuhle kwaye nomntu ohlonipha abantu basetyhini. Eyona nto ayifunayo yinqola - umntu owomeleleyo emzimbeni, engqondweni nasemphefumlweni, ngokuziphatha okungagungqiyo, ukuthembeka okucocekileyo kunye nomkhuseli wangaphantsi.
Uya kuthandana nokubaleka okuphefumlelweyo
Kuya kufuneka ube nenkululeko yokufuna nantoni na. Abafazi abangama-Aries bathanda utshintsho kunye nokulinga ngenxa yendalo yabo eguqukayo kunye nobhetyebhetye.
Ushicilelo oluncinci lwenyani kukuba kufuneka babenolawulo. Abafazi abangama-Aries banotyekelo lokukunyanzela ukuba uthande into, nangona kunjalo ukuba uyazi indlela yokujongana nale meko kwaye wenze uphawu lwakho, inokumchukumisa ngakumbi.
Zama wenze ukuba imihla yakho ingalibaleki kangangoko. Abafazi abangama-Aries banomdla kwaye bayaphuma, ngenxa yoko kufuneka ubenjalo.
Akanakulonwabela uhambo oluya kumyuziyam ngokomzekelo, kodwa angayithanda into yomzimba ngovuyo. Ukubaleka ngothando emehlweni akhe kunokuba kukukhwela ibhayisekile kwindlela yeentaba endaweni yokugcakamela ilanga kwindawo yokutyela ephesheya.
Nangona oku kungakhokelela enkathazweni, ubume obunamandla bama-Aries kwabasetyhini kuthetha ukuba bayakuthanda ukuphuma engxakini. Izicwangciso zomzuzu wokugqibela zihla kakuhle kakhulu.
Ukubaleka okumangalisayo okanye iiholide zomzuzu wokugqibela ziyimizekelo nje embalwa - yenza ngokungxama kuye kwaye uya kuhlala ebuyela kokunye.
Isimo sakhe sengqondo sokungakhathali ngokwemvelo sithetha ukuba uhlala enamandla okukufuna. Into yokugqibela ofuna ukuyenza kunye nebhinqa lama-Aries kukuhlala phantsi kwisidina kunye nesiqhelo. Qhubeka umtyisa imincili kunye nemiceli mngeni, kwaye uya kuyiphumelela intliziyo yakhe ngaphandle kwexesha.
I-capricorn kunye ne-aquarius ubuhlobo bokuhambelana
Unokuba ngumntu onamaphupha akho amakhulu, kunye nokuqhuba kunye nokuzimisela ukuzenza zenzeke. Oko kuya kumnika ingqalelo. Nangona ekrokrela ukuba ufuna ukucima ilangatye lakhe ukubasa ezakho, uyakuphakama ahambe.
Kufanele uzithembe ngobudoda bakho, kunye nomntu ongoyikiswanga ngumfazi ozithembileyo ngokulinganayo. Ukukwazi ukucinga ngeenyawo zakho kwaye uzenzekele yindlela elungileyo yokwenza umfazi we-Aries atsalwe kuwe kwaye afune ukuchitha ixesha elininzi kunye nawe.
Inye kuphela into ekufuneka uyilumkele kukuba amabhinqa ama-Aries aneemvakalelo ezinzima kakhulu. Kuya kufuneka ukwazi ukwenza ngaphezulu kokuqonda kwabo, kufuneka ubamkele nabo.
Oku kunokuba nzima ukukwenza ekuqaleni, kodwa wakube uqonde ukuba kufuneka wamkele umfazi wakho we-Aries njengoko enjalo, kokulungileyo nokubi, kuya kuba lula ke oku.
Enye yezona ndawo zinkulu apho umfazi we-Aries anokukhathazeka khona ukuba uziva ngathi akamanyelwanga.
Kuya kufuneka ube ngumphulaphuli olungileyo ukuze ukwazi ukuphendula ngento enentsingiselo kunokuba uphephe nje. Into yokugqibela azakuyifuna kukuba ubonakale ngathi uyamhoya okanye awumnikeli ngqalelo.
Lo mqondiso ujonge ngaphandle umntu oza kwenza le nto kwaye amkele kokulungileyo nokubi. Ngamanye amaxesha banokukhetha iqabane, kubo bonke abanye abantu, elibonakala lingumdlalo omangalisayo.
Kumfazi we-Aries nangona, ukuba unomntu ekungekho mfuneko yokuba alalanise naye kwisitayile sakhe, uya konwaba ngakumbi.
Yintoni onokuyiphepha kunye nenenekazi lakho leAries
Kuya kufuneka uyazi ngaphambi kokuthandana nomfazi weAries ukuba uya kulindela ulawulo lobudlelwane bakho, kwaye kuya kufuneka umvumele ukuba abe nale nto. Nokuba uzimisele kangakanani na, akukho ndoda iya kucela umngeni kwisikhundla sokuyalela somfazi ongu-Aries.
Unoko engqondweni, kungcono ungazibandakanyi kubuxoki, imidlalo yengqondo okanye ubuqhetseba kunye nebhinqa lama-Aries.
Ayisiyiyo kuphela eyokujika kwakhe okukhulu, kodwa akasayi kuxolela okanye alibale, ebona ngokuthe ngqo ngokunganyaniseki kwangoko. Uya kukuthemba ukuba nje unyanisekile kwaye unyanisekile ngesiqu sakho.
Ubushushu bendalo bakhe buthetha ukuba umsindo wakhe unokuvutha nakwezona zinto zingabalulekanga.
Ngelixa kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukumnceda azole, akufuneki uvumele umsindo wakho ukuba uphumele ngaphandle kolawulo, njengoko engayi kukunyamezela oku.
Oku kunokuhlala kukhokelela kwimpikiswano nakwiimpikiswano. Ukuba incoko iqala ukuya kweli cala, kuya kufuneka wenze umzamo osebenzayo wokuyihambisa kwicala elitsha.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kukho umgca phakathi kokuzithemba kunye nokuzikhukhumeza okungafanelekanga ukuwela kunye nabasetyhini baseAries. Oku kusebenza ngawo onke amaxesha, ngaphandle kokuba ungayisebenzela kwingqiqo yakho.
Unesidingo sokuthandwa, kodwa ufuna ukulawula. Oku kubaluleke kakhulu ukuba ukhumbule ukuba ufuna ukumtsala.
Abafazi baseAries bathanda uxinzelelo lwezesondo kunye neencoko ezingathandekiyo ezenzeka kwangethuba kubudlelwane, kodwa uyakholelwa ukuba oku kufuneka kuqhubeke ngokuhamba kwexesha. Uya kukhawuleza ukuqhawula ubudlelwane ukuba ubudlelwane buqala ukufumana ifomula.
Ukuzama ukunyanzela nantoni na kuye okanye ukumenza ukuba enze nantoni na angayifuniyo kuyindlela yentlekele. Abafazi base-Aries bathanda ukuzimela kunye nenkululeko, banezimvo zabo kuyo yonke into kwaye akukho nto inokutshintsha iingqondo zabo.
Ukungathembeki okanye ukungabikho kokunyaniseka yindlela eyodwa yokufumana ingqumbo yomfazi we-Aries - kuya kufuneka abe lilungu elinye emehlweni akho kwaye kungabikho nto ingaphantsi.
Abafazi balo mqondiso bangama-extroverts. Banxibelelana neemvakalelo zabo ngokukhawuleza nangokulula, bakufumanisa kunzima ukuqonda ukuba neentloni ezifumaneka kweminye imiqondiso. Ukuba uneentloni, kungcono kungcono ukuyigcina ecaleni kwisibini sokuqala semihla.
Ungabuyisa njani umfazi ongumfazi
Abafazi abangama-Aries kunqabile ukuba bathande ukuba nzima, enyanisweni bahlala belangazelela ukulula. Akayi kuzama ukudlala imidlalo yengqondo kunye nawe, kwaye uya kuhlala ethe ngqo, ekuxelela izinto kunokulindela ukuba uzisebenzele.
Uya kugxininisa kuphela intsingiselo yothando ukuba ngaba luthetha okuthile kuye. Ukuqonda oku kubalulekile ukuba ube nomfazi waseAries. Gcina izinto zilula kwaye umgcine esonwabisa.
Yintoni ekufuneka uyigcinile engqondweni malunga neAries woman
Umfazi we-Aries uya kuhlala emile ecaleni kwakho kwaye akuphakamise asuse ezinyaweni zakho. Mphathe ngothando, uxabiso kunye nokuthembeka, kwaye uya kukubuyekeza ngokuzalisekisa ubomi bakho bothando ngokufanelekileyo.
Kuya kufuneka ubekhona ezinzwaneni zakho xa uthandana nomntu ongumfazi we-Aries, kwaye unakekele ukumnika ixesha kwaye ubonise ingqalelo kwiinkcukacha.
Abasetyhini be-Aries balindele ukuba indoda yabo ihoye ngalo lonke ixesha, kangangokuba ikwalindele ukuba uzive unethamsanqa lokuba unikwe ithuba lokumthanda!
Ubona iswekile egutyungelwe kukuncoma ngokulula, ke kufanelekile ukuba uqaphele amagama akho. Oko akutsho ukuba awufanele umncome konke konke, kodwa akukho sidingo sincinci semibongo, iileta kunye nezinye izimbo zomzimba ezigqithileyo- uluvo olulula nolunyanisekileyo malunga neenwele zakhe okanye indlela akhangeleka ngayo iya kuhamba phambili.
Uyasebenza ngokwaneleyo ukuba akhokele kwaye aqalise incoko, kwaye ukhaliphile ngokwaneleyo ukuba abe ngowokuqala ukuthatha inyathelo. Endaweni yokumleqa okanye ukumncoma kakhulu, angathanda ukuva malunga nezinto ozenzileyo kunye nempumelelo yakho.
Uhlobo olusebenzayo lomfazi wase-Aries lithetha ukuba ligorha lokulinda. Uswele umonde wendlela elinganisiweyo kwaye ufuna ukoneliseka kwangoko. Ufuna le nto ayifunayo ngoku ukuze azonwabele iziphumo.
Akenzi xolo ngokuba ngudlalani- mhlawumbi wabhala incwadi yokudlala ngothando eyi-101. Oku kuza ngokwendalo kuye, ukuze angakwazi ukusebenza nzima ukuba asebenze kwincoko, kwaye enze abo bamngqongileyo babe neentloni kwinkqubo.
Kukhuselekile ukuba ungowasetyhini waseAlfa. Uyinkokeli, uzibona ephethe kwaye unamandla endalo angenakuhoywa. Ukuba uzibona unethamsanqa elaneleyo lokuba nentliziyo yakhe, ke qiniseka ukuba uneqhekeza lalo ngonaphakade.
Olu lawulo lwandisela nakubomi bakhe-ukuba umfazi wase-Aries ufuna into aza kuyilandela… kwaye unokuyifumana nayo!
Oku kuqhuba kuthetha ukuba uyakwenza ubomi kunye nawe abanye abaza kuba nomona ngabo. Ekuphela kwento ayifunayo kuwe kukumqonda.
Into yakhe yoMlilo ithetha ukuba unokuba neshushu kodwa athembeke kakhulu, ke oku kuthetha ukuba kuya kufuneka umvumele ukuba alawule ubudlelwane, nangona onwabile ukuba ume kuye ngamanye amaxesha uthathe uxanduva xa kufuneka .
Ngale nto engqondweni, khumbula ukuba umfazi wase-Aries akasoze azithobe kwaye abe ngumfazi wendlu okanye ogcina umntwana.
Ukunikezelwa kokuqhuba kwakhe kunye nokuzingca ngokuzifeza kwakhe, kuya kuthatha okuninzi ukubamba ingqalelo yomfazi wase-Aries.
Nokuba kunyuka ileli yobumbano okanye ukuqala ishishini, uya kuba sele enayo okanye abe neendawo zakhe zokubeka ngokuqinileyo kuyo - ujonge kuphela umntu onokumane emlandela. Ngale nto engqondweni, kunokwenzeka ukuba atsaleleke kumntu othatha impumelelo yakhe ngokungathí sina njengoko ethatha eyakhe.
Ukuthandana neAries Woman: Izinto omele ukuzazi
Ngaba ama-Aries Abasetyhini banomona kwaye banako?
uya libra umntu abuye
I-Aries Woman In Love: Ngaba Uyadibana?
Umfazi we-Aries: Iimpawu eziphambili kuThando, uMsebenzi kunye noBomi
I-Pisces Sun Libra Moon: Ubuntu obuVumelanayo
I-Sagittarius Sun Gemini inyanga: Ubuntu obunomdla
NgoJanuwari 13 I-Zodiac yiCapricorn-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Nantsi iprofayili epheleleyo yeenkwenkwezi yomntu owazalwa phantsi kwe-13 kaJanuwari zodiac. Ingxelo iveza iinkcukacha zomqondiso weCapricorn, ukuhambelana kothando kunye nobuntu.
Indoda yeHashe: Iimpawu eziPhambili zoBuntu kunye nokuziphatha
Indoda yeHashe ineenjongo ezintle kwaye iya kwenza konke okusemandleni ayo ukuze ifikelele ngelo xesha, iyabukeka kwaye iyathanda ukubaleka nezinto ezininzi ukuze ibe nobomi obonwabisayo.
I-Libra kaJulayi 2017 yeHososcope yeNyanga
I-Libra kaJulayi ye-2017 yenyanga yehoroscope iqikelela amaxesha alula emsebenzini, amaxesha okuhamba kunye nokujongana nento esebenzayo ekhaya.
Ungamtsala njani uMfazi weVirgo: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza awele Ethandweni
Isitshixo sokutsala umfazi weVirgo kukumomeleza kunye nokumnika amandla ngelixa ebonisa ukuba uthembekile kodwa naye angonwaba ngobomi bakhe nawe.
NgoSeptemba 23 Imihla yokuzalwa
Nali iphepha elinomdla malunga neentsuku zokuzalwa zikaSeptemba 23 kunye neentsingiselo zabo zeenkwenkwezi kunye neempawu zomqondiso we-zodiac oyiLibra yiAstroshopee.com
Ihagu yaseTshayina Zodiac: Iimpawu eziPhambili zoBuntu, uthando kunye nethemba lomsebenzi
Abo bazalwe ngonyaka wehagu banokugcina ezinye izinto kubo kodwa xa ilixesha lokuthetha, banokuba nezimvo ngakumbi kunaye nabani na.
Rat kunye nenyoka ukuhambelana ngokuhambelana: Ulwalamano olunamandla
I-Rat kunye neNyoka zinokuthi zithandane ngokulula kwaye zithandwe ngokukhawuleza ziimpawu zazo.
Ukuhambelana kwamanani kwi3
Uphawu lweTaurus Sign
yintoni ngoSeptemba 30 uphawu lweenkwenkwezi
Njani umfazi pisces ukudlala ngothando
Indoda ye-aquarius enomona kunye nezinto
Libra umfazi scorpio ubudlelwane bomntu
indoda ye-taurus kunye ne-aries yokuhambelana komfazi
Uphawu lweZodiac ngoMeyi 2